साराको ‘सुश्री सम्पत्ति’, सलोन र बिनोद पछि लाग्लान कति ? (फोटो) « Mazzako Online
साराको ‘सुश्री सम्पत्ति’, सलोन र बिनोद पछि लाग्लान कति ? (फोटो)
आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि एउटा नयाँ फिल्मको औपचारिक घोषणा गरियो । फिल्म हो, ‘सुश्री सम्पत्ति’ । सञ्चारकर्मी सुव्रत आचार्यको निर्देशन रहने उक्त फिल्ममा नायक सलोन बस्नेत र नायिका सारा शिर्पाइलीको मुख्य भुमिका रहनेछ । फागुन १५ गतेदेखि फिल्मको छायाँकन सुरु हुने जानकारी गराइयो ।
फिल्म ‘सुश्री सम्पत्ति’ लाई निर्माता रमेश त्वायनाले निर्माण गर्दैछन् । यसअघि निर्माता त्वायनाले ‘आधी बाटो’ फिल्म निर्माण गरेका थिए । फिल्मको सबैजसो सुटिङ पोखरामा हुने निर्माता त्वायनाले जानकारी दिए । केही सिन मात्रै भत्तपुरमा हुनेछ ।
यसअधि अर्धकट्टी निर्देशक गरेका आचार्यकै कथा रहेको ‘सुश्री सम्पत्ति’ मा नायिका प्रियंका कार्की विशेष भूमिकामा प्रस्तुत हुँदैछिन् । फिल्ममा सलोन, सारा पियंकासंगै विनोद न्यौपाने, प्रमोद अग्रहरी, राजाराम पौडेल, जयनन्द लामा, विशारत बस्नेत, सन्तोष खनाल, सुनिता श्रेष्ठ ठाकुर, प्रेमबर्षा खड्का, रोशनी केसी, रञ्जित कोइराला, विनोद पौडेल लगायतको अभिनय रहने छ ।